Galmudug oo war ka soo saartay dagaallo ka dhacay duleedka Dhuusamareeb | Warkii.com
Home warkii Galmudug oo war ka soo saartay dagaallo ka dhacay duleedka Dhuusamareeb
Galmudug oo war ka soo saartay dagaallo ka dhacay duleedka Dhuusamareeb
Wasaaradda amniga maamulka Galmudug ayaa faah faahin ka bixisay dagaallo u dhexeeyey ciidamada maamulkaas iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo isku dhinac & Al-Shabaab oo shalay ka dhacay duleedka Dhuusamareeb.
Dagaallada ayaa xoogoodu waxa ay ka dhaceen tuulooyin hoos yimaada deegaanka Bulacle oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya.
Warka ka soo baxay wasaaradda amniga Galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalladaasi ay ku digeen illaa 10 dagaalyahan oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab, dhankoodana ay uga geeriyoodeen ugu yaraan 3 askari, sida ay hadalka u dhigtay.
Sidoo kale wasaaradda ayaa shaacisay inay ciidamada Galmudug iyo kuwa Xoogga dalka, qeybta 21-aad ay la wareegeen tuulada Ceel Cali-Mire oo koonfur bari ka xigta magaalada Dhusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug.
Dhinaca kale Al-Shabaab ayaa guullo ka sheegatay dagaalladaasi, waxaana ay shaacisay inay khasaare lixaad leh gaarsiiyeen ciidamadii weerarka ku soo qaaday.
Xaaladda ayaa haatan kacsan, iyada oo haatan dhaq-dhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayo deegaano hoostaga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya.
Maalmihii u dambeeyey ayaa ciidamada huwanta waxay howl-gallo ka bilaabeen duleedka Dhuusamareeb oo ay weeraro ka soo qaadeen dagaalyahanada Al-Shabaab.
Previous articleQoys Hindi ah oo dacwo ka ah seyga gabadhooda oo ku dhibaateysan Soomaaliya
Next articleCC Shakuur oo labo arrin uga horyimid guddiyada doorashooyinka dalka
Joe Biden oo jawaab kulul ka bixiyey weerarkii uu Trump ku...
Musharaxa madaxweynaha Mareykanka ee xisbiga Dimoqraadiga Joe Biden ayaa jawaab kulul ka bixiyey aflagaadada iyo weerarka uu madaxweyne Trump mar kasta kula kaco...
Waa kuma madaxweynaha cusub ee la doortay ee maamulka HirShabeelle?
Sidee ku timid raali-gelintii uu Xasan Cali Kheyre xalay siiyey CC...
Shirkadaha diyaaradaha oo diiday inay Dhuusamareeb tagaan kadib weerarkii lagu qaaday...
Wararkii ugu dambeeyey dagaalka gobolka Tigray
Saameynta uu Joe Biden ku yeelan karo dunida Islaamka
Hooyo umul aheyd iyo carruurteedii oo lagu dilay Warsheekh
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka ee maamulka Joe Biden oo la shaaciyey
Daawo Sawirada:- Madaxweynaha Soomaaliya oo billad sharaf gudoonsiiyey shaqaale